Netanyahu: Falastiiniyiintu xaqiiqada ha wajahaan | Baydhabo Online
Netanyahu: Falastiiniyiintu xaqiiqada ha wajahaan
Ra’iisulwasaraaha Israa’iil ayaa sheegay in ay waajib tahay in Falastiiniyiintu “ay u daadagaan” xaqiiqada ah in Qudus ay tahay caasimadda Israa’iil si loogu dhaqaaqo dhanka geeddi socodka nabadda.
Dhanka kalana afhayeen u hadlay madaxweyne ku xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa si wayn u dhaliilay maamulka Falastiiniyiinta, isaga oo sheegay “in ay nasiib darro tahay” in madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas uu diido in uu la kulmo Pence, marka uu dhawaan booqasho ku tago gobolka.
Masarna, masuuliyiinta ugu sarreeya diinta Muslimka iyo midda Masiixiyiinta ayaa baajiyay kulan ay la qaadan lahaayeen madaxweyne ku xigeenka Maraykanka oo horay loo sii qorsheeyay, iyaga oo ka biyo diidan go’aanka Maraykanka.
Waxaa jira cambaarayn tiro badan oo loo soo jeediyay go’aankii uu qaatay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, kaas oo uu kaga laabtay dhexdhexaadnimadii Maraykanka ee lahaanshaha magaalada Qudus taas oo ah wadnaha khilaadka dhexyaalla Israa’iil iyo Falastiiniyiinta.
Israa’iil ayaa waligeed u aragta Qudus caasimaddeeda, halka Falastiiniyiintuna ay ka sheegtaan Bariga Qudus oo ay Israa’iil ku qabsatay dagaal sannadkii 1967dii in ay tahay caasimadda mustaqbalka ee xukuumadda ay Falastiin yeelan doonto.
Axaddii waxaa sii socday mudaaharaadyo lagu diidan yahay go’aanka Maraykanka:
Dhulka Falastiiniyiintana mudaaharaadyo ayaa ka sii socday, halka ay Israa’iilna ka sheegtay in ay qarxisay marin dhulka hoostiisa ku yaalla oo magaala Qaza ku yaalla, kaas oo ay sheegtay in loo qoday si weerar milatari loogu adeegsado.
Kumannaan ruux oo kalana waxay mudaaharaad ka dhigeen bannaanka safaaradda Maraykanka ee ku taalla caasimadda Indonosea ee Jakarta, dadkaas qaar ka mid ahna waxay warfinayeen boorar ay ku qoran yihiin “Falastiin wadnahanaga ayay ku taallaa”.